2020 – Asian Harm Reduction Network (AHRN)
Best Shelter For Her Program
Community Based Outreach Activities
Overdose Management and Prevention
Counseling and Psycho-Social Support
Methadone Maintenance Therapy (MMT)
24 hour In-House Care Centre
Active Case Finding (Mobile Tuberculosis Treatment)
Drop-in Centre (Female)
ART Provision to PWID/PWUD on MMT
AHRN Needle Syringe-Automatic Taking Machine (ATM)
Peer Support Group : BSPSG
Exciting Annual AHRN Leadership Meeting!
12/12/2020 by albert wilson Posted in Activities, Home-Slider
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ AHRN ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
AHRN ရဲ့ ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို AHRN ရဲ့ စီမံကိန်းအသီးသီးမှ စီမန်ကိန်း မန်နေဂျာများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးများ နှင့် ရန်ကုန်ရုံးချုပ်မှ စီမံအုပ်ချုပ်မှု အဖွဲ့ဝင်များဖြင့် စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း ၆၀ ကျော်ခန့်တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲကို အွန်လိုင်းမှတဆင့်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ယခင်နှစ်မှ အတွေ့ကြုံများ စိန်ခေါ်မှုများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ရှေ့နှစ်များအတွက် စီမံချက်များရေးဆွဲအကောင်ထည်ဖော်ခြင်းနှင့် အောင်မြင်မှုများအတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်ဟာ အမှတ်တရနှစ် တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝတွေကို ဆိုးရွားစေခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆိုးရွားမှုတွေကြားကပင် AHRN ဟာ ပြည်သူ့အသက်ကယ် အန္တရာယ်လျော့ချခြင်း လုပ်ငန်းများကို မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ နှင့် ရပ်ရွာနေပြည်သူပေါင်း ၆၀,၀၀၀ ကျော်ခန့်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
AHRN အနေဖြင့် လာမည့်နှစ်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်ပေး သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် Buprenorphine and Pre-exposure Prophylaxis ဝန်ဆောင်မှုကို AHRN ၏ အချို့စီမံချက်ဒေသများတွင်စတင်စမ်းသပ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊
ထို့ပြင် ၂၀၂၁ မှာလည်း AHRN ရဲ့ မိတ်ဖက်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Best Shelter အဖွဲ့နှင့်အတူတကွ ရပ်ရွာပြည်သူအတွက် မူးယစ်‌ဆေးဝါးအန္တရာယ် လျော့ချခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် ညွှန်းပို့ခြင်းများကို ကချင်ပြည်နယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် မြို့ပေါ်နှင့်သွားလာရခက်ခဲသော ဒေသများပါမကျန် တိုးချဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ရည်သန်လျက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုရယူနေသော မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူများ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များနှင့် ရပ်ရွာနေပြည်သူများကို စိတ်စေတနာဖြူစင်စွာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ကြသော ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှ စီမံချက်ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
#MOHS #NAP #DDTRU #GFATM #UHF #USAID #AHF #UNAIDS #MHF #GiZ
Today the combined AHRN leadership – over 60 Project Managers and Medical Coordinators and the Yangon Central Management – gathered virtually to reflect on, discuss and learn from last year work and challenges, to strategize on upcoming planning, as well as to celebrate our many achievements.
2020 was and isamemorable year, while COVID-19 disrupted daily life in Myanmar and caused deep societal hardship, #AHRN was able to uphold her life-saving community harm reduction work, serving close to 60.000 clients, loved-ones and their communities.
AHRN was able to secure next year’s resources not only to maintain its critical services, but also introduce exciting new interventions under the guidance of the #MoHS, next year we will pilot Buprenorphine and Pre-exposure Prophylaxis as part of our comprehensive harm reduction cascade in selected project sites.
Also in 2021 we will together with our local partner Best Shelter expand our community prevention and referral activities in remote rural Kachin, Sagain and Shan.
Compliments and Big Thank You All Project Teams for your dedication, your kind and professional service to our clients and local communities!
Today, December 1, is the International World AIDS Day.
01/12/2020 by AHRN IT Posted in Activities, Home-Slider
ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ (၁) ရက်နေ့ကနှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ (World AIDS Day) ဖြစ်ပါတယ်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် တာမခံနားခိုရာ (AHRN)နှင့် တာမခံ ကြက်ခြေနီအသင်းတို့ပူးပေါင်း၍ World AIDS Day အထိမ်းအမှတ် HIV ပိုးနှင့် ပတ်သတ်သောအသိပညာပေးခြင်း COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အသိပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြုမှုပြောင်းလဲရေး ဆက်သွယ်ပညာပေး လူထုလှုပ်ရှားမှုစီမံချက် (Face Mask Campaign) mask များပေးဝေခြင်းကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
COVID-19 ရောဂါ ဒေသတွင်းကူးစက်မှုလျော့နည်းစေရေးအတွက် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများနှင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကို အလေ့အကျင့်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဈေးများအပါအဝင် လူစည်ကားရာနေရာများ၊ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်နိုင် ခြေမြင့်မားသော နေရာများတွင် ပြည်သူများအား ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်းများ အခမဲ့ဖြန့် ဝေခြင်း၊ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အမှုအကျင့်ကောင်းများကို လက်ကိုင် အသံချဲ့စက်များဖြင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း၊ အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Global solidarity, shared responsibility
“အားလုံးညီညွတ်ပေါင်းစည်းလို့ တာဝန်ကိုယ်စီမျှယူစို့” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Under the guidance of Ministry of Health and Sports; AHRN in collaboration with Red Cross hold the World AIDS Day HIV / AIDS Awareness Raising Campaign along with (COVID-19) Health Awareness Campaign which is (Face Mask Campaign).
In order to reduce the spread of the COVID-19 disease in the region, drug users and the public should practice preventive measures in public places, including markets. Activities involve free distribution of face masks to the public in high-risk areas for COVID-19 infection; Health education on COVID-19 disease prevention practices through handheld pamphlets and dissemination of information leaflets.
World AIDS Day – A Patient Pespective.
01/12/2020 by AHRN IT Posted in Activities
World AIDS Day – A Patient Perspective.
An animation ofaclients’ experience in personal change, HIV testing, ART and methadone treatment.
A story of reaching life-saving treatments at #AHRN, under very difficult (living) circumstances in the remote rural hard-to-reach areas in northern Myanmar.
AHRN-Shwe Ku project is funded by AHF
#WAD #ART #MMT #AHRN
မူးယစ်ဆေးအစားထိုးကုသမှု မက်သာဒုန်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Lashio (Northern Shan State)
D-21, Padonmar Street, Ward 4, Lashio, Northern Shan State
Laukkai (Northern Shan State)
Paung Phone Street, Near Nyein Chan YaeKyaukTaing, Bama Tan, Laukkai
No. 33, ThitSar Road, MyoThit Ward, Myitkyina, Kachin State
Waimaw (Kachin State)
No. 95, Ward 2, Waimaw Township, Kachin State
Bamaw (Kachin State)
No. 448, Nyaung Pin Ward, Bamaw Township, Kachin State
Hpakant (Kachin State)
No. 4/46, Maw One Ward, Hpakant Township, Kachin State
SengTaung (Kachin State)
No. 4/351, Pharpyin Street, SengTaung, Hpakant Township, Kachin State
Lone Khin (Kachin State)
Ah Ya/48, Aung Ra Ward, Lone Khin village, Kachin State
Seizin (Kachin State)
No. 5/49, Ward 5, Seizin village, Kachin State
Tamakhan (Kachin State)
No. 7/339, Ward 7, Tar Ma Khan MyoThit, Hpakant Township, Kachin State
Shwe Ku (Kachin State)
No (4), Baw GaBala Ward, Shwe Ku Township, Bamaw District, Kachin State
Kalay (Sagaing Division)
No. 30, Block 3, Min GalarOo-yin Ward, Kalay, Sagaing Division
Tamu (Sagiang Division)
No. 49, NguWah Street, Zay Tan6Ward, Tamu, Sagaing Division
Kathar (Sagaing Division)
No. 2, Myo Taw Khan Ma Street, Ward 5, Kathar Township, Sagaing Division
No. 135(G), Mawyawaddy Street,
Pyay Road, 8 Mile,
Mayangone Tsp, Yangon
Tel: 01-666731, 652903, 665874
မူးယစ်ဆေးအစားထိုးကုသမှု မက်သာဒုန်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ 14/02/2021
Exciting Annual AHRN Leadership Meeting! 12/12/2020
Today, December 1, is the International World AIDS Day. 01/12/2020
World AIDS Day – A Patient Pespective. 01/12/2020
Exciting! Today is the ‘5th Annual NSATM Owners…………….. 30/11/2020
Archives Select Month February 2021 (1) December 2020 (3) November 2020 (4) October 2020 (1) September 2020 (2) August 2020 (1) July 2020 (7) June 2020 (3) May 2020 (6) April 2020 (11) March 2020 (3) February 2020 (2) January 2020 (2) December 2019 (2) October 2019 (1) July 2019 (11) November 2018 (2) October 2018 (6) August 2018 (3) July 2018 (4) April 2018 (1) September 2017 (3) August 2017 (1) July 2017 (8) March 2017 (7) October 2016 (16) September 2016 (10) February 2014 (6)
© 2021 AHRN, Yangon, Myanmar. All rights reserved. Disclaimer